घर–घरमा हिंसा, सोकेसमा कानुन- विचार - कान्तिपुर समाचार
घर–घरमा हिंसा, सोकेसमा कानुन
श्रावण २८, २०७४ टीका पौडेल
घरेलु हिंसा (कसुर र सजाय) ऐन पारित भएको आठ वर्ष भयो । अति आवश्यक परी जनस्तरबाट भएको माग र संघर्षको परिणामस्वरुप घरेलु हिंसाविरुद्ध कानुन त बन्यो, तर यसको लाभ र प्रभाव आम पीडितसम्म पुग्नसकेको छैन ।
घरेलु हिंसाको समस्या अत्यधिक भए पनि सम्बन्धित कानुनको व्यावहारिक प्रयोग हुन नसकी सजाउने वस्तुका रूपमा सीमित रहेकाले यसमा सुधार ल्याउन जरुरी देखिन्छ ।
व्यक्तिको सुरक्षित र सम्मानजनक बाँच्न पाउने अधिकारको सम्मान गर्दै हिंसाजन्य कार्य दण्डनीय बनाई पीडितलाई न्याय र संरक्षण गर्ने ऐनको उद्देश्य हो । कानुनले हिंसा पीडितलाई बसेकै घरमा रहनदिनुका साथै अन्यायपूर्ण व्यवहार नगर्न अन्तरिम संरक्षणात्मक आदेश व्यवस्था गरेको छ । यसले पीडक घरमा बसेर पीडितको भागमा पर्ने सम्पत्तिसमेत उपभोग गर्ने र पीडित न्यायको प्रतीक्षामा सडकमा बस्नुपर्ने अत्याचार अन्त्य गरेको छ । साथै कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर घरमा राखिएका धर्मपुत्र, आश्रित वा कामदारलाई घरेलु हिंसामा परिवारका सदस्य समान मानेको छ । यसले हिंसाको सिकार हुने बढी सम्भावना भएका व्यक्तिहरूको संरक्षण गरेको छ । घरेलु हिंसा विरुद्ध ऐनले हिंसाको वर्गीकरण गरी शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य र आर्थिक हिंसाको परिभाषा गरेको छ, जसले सबैजसो हिंसाजन्य कार्यलाई समेटेको छ । घरेलु हिंसाको उजुरी जसले पनि गर्नसक्ने कानुनी व्यवस्थाले पीडकको निरंकुशता र ज्यादती अन्त्य गरेको छ ।
घरेलु हिंसा विरुद्ध मुद्दाको उजुरी स्थानीय निकाय, प्रहरी कार्यालय, राष्ट्रिय महिला आयोग र अदालतमा घटना भएको ९० दिनभित्र गर्नुपर्छ । अदालत बाहेकका निकायलाई अन्तरिम संरक्षणात्मक आदेश गर्ने अधिकार छैन । मुद्दा ती निकायबाट अदालत पुगेपछि मात्र आदेश हुनसक्छ । यस्तो अवस्थामा हिंसा पीडित घर निकाला भएको अवस्थामा पीडा लामो समयसम्म भोग्नुपर्ने हुनसक्छ । घरेलु हिंसामा बढीमा २५ हजारसम्म जरिवाना वा ६ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय, पटकेलाई पटकैपिच्छे दोब्बर र उद्योग वा मतियारलाई आधा सजाय हुने व्यवस्था छ । सार्वजनिक पदको व्यक्तिलाई थप १० प्रतिशत सजाय र अदालतको संरक्षणात्मक आदेश पालना नगर्नेलाई २ हजारदेखि १५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा ४ महिनासम्म कैद वा दुवै सजायको व्यवस्था छ । ऐनमा विभिन्न प्रकारका सजायमा मूल कसुरदारलाई पहिलोपटक हुने कैद सजाय अत्यन्तै कम छ । घरेलु हिंसाका अधिकांश घटना दण्ड–सजायको डर नभएर नै हुने गरेका छन् । कतिलाई त घरेलु हिंसामा सजाय हुन्छ भन्ने ख्यालै छैन ।
घरेलु हिंसा पीडितले अन्य कुनै उपायले शान्ति नभएपछि मुद्दा दायर गर्छन् । मुद्दा पीडितको चरम पीडाबाट उत्पन्न बाध्यताको उपज हो । मुद्दाले पारिवारिक सम्बन्ध टुट्न सक्ने, जीविकामा चौतर्फी समस्या आउने, एउटा पारिवारिक शृङखला अन्त्य हुने, पुन: पारिवारिक संरचना स्थापना हुन नसकी जीवनभर एक्लो बाँच्न बाध्य हुनुपर्ने लगायतका पीडा भोग्नुपर्ने हुनसक्छ । हिंसा पीडितहरू पीडाको तुलनामा पीडकलाई हुने सजाय यथोचित नभएको निराशा व्यक्त गर्छन् ।
घरेलु हिंसा न्यूनीकरण तथा नियन्त्रणका लागि कानुनी व्यवस्थालाई अझ प्रभावकारी बनाउन जरुरी छ । संविधानको धारा १२७ को व्यवस्था अनुसार कानुन बमोजिम मुद्दा हेर्न स्थानीय स्तरमा न्यायिक निकाय चाँडै स्थापना गरिनुपर्छ र मुद्दा त्यस्तो निष्पक्ष हेरिनुपर्छ । साथै घरेलु हिंसा पीडितले घरमा बस्न चाहे जुन निकायमा उजुरी गरे पनि तत्काल अन्तरिम संरक्षणात्मक आदेश हुनसक्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । अन्तरिम संरक्षणात्मक आदेश पालन नगर्नेलाई तत्काल थुनामा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । न्यायिक कार्यविधिमा पीडक र पीडितबीच मेलमिलाप प्रक्रिया अनिवार्य अवलम्बन गर्ने व्यवस्था हुुुनुपर्छ । मूल कसुरदारलाई न्यूनतम हद नतोकी हालको ६ महिनासम्मको कैद सजाय बढाएर तीन वर्षसम्म बनाइनुपर्छ । त्यस्तो सजाय तोके घटनाको प्रकृति हेरी न्यायमा विवेक प्रयोग गर्ने ठाउँ रहन्छ ।
वृद्ध, बालक, अशक्त, बिरामी, रोगी, गर्भवती, सुत्केरी, अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई घरेलु हिंसा गर्ने परिवारका जुनसुकै सदस्यलाई थप सजायको समेत व्यवस्था गरिनुपर्छ । व्यक्तिका लागि घरपरिवार नै संसार हो भने पारिवारिक शान्ति, समृद्ध समाज र देश विकासको पनि आधार हो । परिवारभित्र सामान्यदेखि जीवन अभिशाप लाग्नेसम्मको हिंसालाई हल्का बुभ्mनु आम नागरिकप्रतिको अन्याय हो । कानुनमा प्रवेश नगरी पारिवारिक मेलमिलाप कायम राख्ने सबैको पहिलो चाहना र आवश्यकता हो । अन्य उपाय नलागी पीडित कानुनको सहारा लिन बाध्य भए उसलाई न्याय र पीडकलाई सजाय दिनेगरी प्रभावकारी कानुुनी प्रावधान राख्न आवश्यक हुन्छ । साथै हिंसाको मात्रा, प्रकृति र परिमाणको आधारमा पीडकलाई न्यूनतम गर्नुपर्ने सजाय र समाज तथा परिवारलाई नै असर पर्ने अत्यन्त गम्भीर प्रकृतिको हिंसा पहिचान गरी त्यसमा गर्नुपर्ने सजायसमेत यकिन गर्न आश्यक छ । यस्ता कानुनको प्रचार र जानकारी आम जनतासम्म प्रसार गर्न सक्दा पनि धेरै घरेलु हिंसाका घटना कम हुने देखिन्छ । पीडितलाई उचित क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था हुने र तत्काल संरक्षणको व्यवस्था गर्ने हो भने न्यायको बाटो धेरै पीडितले रोज्ने थिए । तसर्थ घरेलु हिंसा न्यूनीकरण तथा नियन्त्रण सम्बन्धी कानुनसँगै यसको कार्यान्वयन पक्षसमेत सुधार गर्नसके घर सबै सदस्यका लागि सुरक्षा र सुख प्रत्याभूितको आधारमा बन्छ र कानुनको व्यावहारिक कार्यान्वयनबाट समस्या न्यूनीकरण तथा नियन्त्रण सम्भव हुन्छ ।
प्रकाशित : श्रावण २८, २०७४ ०७:५८
सिउँडी : एउटा अर्को रामशरण
श्रावण २८, २०७४ विमल निभा
म आफ्नो घरधनीको असाध्यै इज्जत गर्छु । किनभने उनको राजधानीमा चार–चारवटा पक्की घर छन् । अर्थ मन्त्रालयमा जागिर खान्छन् । र जे गर्छन्, नियमपूर्वक गर्छन् ।
चाहे त्यो भ्रष्टाचार नै किन नहोस् ! म त उनको पाँचतले घरलाई समेत ठूलो आदर गर्छु । यसको कोठा–कोठालाई सधैं प्रणाम भन्छु । एउटा सच्चा किरायादारको नाताले यही मेरो परम कर्तव्य हो । यसको पूर्णतया पालन गर्न म प्रतिबद्ध छु ।
एकाबिहानै कसैले मेरो ढोका ढकढक्यायो । खोलेर हेरेँ । घरधनी रहेछन् । त्यसैले आफ्नो स्वभाव अनुसार दस औंला जोडेर नमस्कार गरेंँ । उनले यसको प्रत्युत्तरमा तुरुन्तै भने, ‘यो महिनाको भाडा खोई ?’
मैले दयनीय अनुहार बनाएँ । यसका लागि कुनै अतिरिक्त प्रयास गर्नुपरेन । यहाँ घर नभएकाहरूका यस्तो अभ्यास हुन्छ । त्यसपछि मैले विनम्र स्वरमा भनेंँ, ‘यसपालि केही ढिलो हुनगयो दाइ ।’
उनको दुवै पुष्ट गाला राता–राता भए । तर कुनै लाजले होइन । अपितु क्रोधको आधिक्यले यस्तो भएको थियो । अत: कडकेर भने, ‘यो देशको आर्थिक अवस्थामा यत्रो सुधार भइसकेको छ । तर तपाई भने एक महिनाको भाडा दिन पनि कचकच गर्नुहुन्छ । के हो यो भैया ?’
‘तलब बेलैमै आएन । के गर्ने दाइ ? केही समय त दिनैपर्‍यो ।’ मैले अरू नम्र भएर भनँें, ‘बुझाइ हाल्छु
नि दाइ ।’
‘तपाई जस्ताले गर्दा नेपालको विकास तीव्र हुन नसकेको हो । नत्र ता हामी धेरै अगाडि बढिसक्ने थियौं । हामीसँग साधनस्रोतको के कमी छ ?’ उनले मेरो आँखामा हेरेर भने, ‘तपाई भने एक महिनाको भाडा पनि तिर्न सक्नुहुन्न । यसरी त प्रगति हुँदैन भैया ।’
घरधनीको कुरा सुनेर म सोच्न थालेँ– के यो देशको विकासमा मेरो कुनै हात छैन ? हो, मेरो परिश्रम र प्रयत्नविना नै देश अघि बढिरहेको छ । अब म के गर्न सक्छु ? मैले काँतर स्वरमा गुनासो गरे, ‘दाइ, महंँगी बढेको बढ्यै छ ।’
‘तर हाम्रो आर्थिक वृद्धिदर पनि त राम्रो छ, भैया ।’ उनले भने ।
‘छोराछोरीहरूलाई पढाउन गाह्रो भइसक्यो ।’
‘हामीकहाँ विदेशी सहयोग प्रशस्त आइरहेको छ ।’
‘दुई छाक जसो गरे पनि खानैपर्‍यो, दाइ ।’
‘प्रत्येक परिवारको समृद्धिको स्तर पनि त माथि गएको छ, भैया ।’
‘म चाँडै भाडा तिरिहाल्छु, दाइ ।’ म मूल विषयमा आएँ ।
‘यसरी कसरी हुन्छ, भैया । जाबो पन्ध्र सय रुपियाँ महिनाको दिन सक्नुहुन्न । तपाईले कोठा खाली गरे हुन्छ ।’ उनी एक्कासी पड्किए, ‘तपाई जस्ताको भरोसामा यो देश विलकुलै सम्पन्न हुनसक्दैन । बुझ्नुभयो त भैया ?’ उनी आफ्नो चस्मा भित्रको तिखो आँखाले मलाई हेर्न थाले । म भयले लत्र्याकलुत्रुक भएँ । (अथवा लाजले हो कि ) ।
‘यसरी चल्दैन भैया ।’ उनी क्रुद्ध भए ।
‘एक हप्ताको समय त दिनैपर्‍यो, दाइ ।’ मैले आफ्नो तमाम विनम्रताका साथ विन्ती गरेंँ । अहिले यही एकमात्र उपाय थियो, जसको कुशलतापूर्वक प्रयोग गरेर म जोगिन सक्थेंँ ।
‘तपाईंले कि त मेरो घर छाड्नोस् कि भोलि नै पैसा तिर्नाेस् । एक महिनाको भाडा दिन पनि यति ढिलो † त्यसैले नेपालको उन्नतिमा ह्रास आएको हो । तर कुनै चिन्ताको कुरा छैन ।’ उनले गम्भीर भएर भने, ‘यहाँ हामी पनि त छौं । यो देश आर्थिक रूपले सुदृढ भइसकेको छ । किनभने नेपाल भाडा दिनेहरूका मात्र होइन, भाडा लिनेहरूका पनि देश हो । यो अघि बढ्छ, बढ्छ । कसले रोक्न सक्छ ?’
एकाएक मलाई लाग्यो, साक्षात अर्थमन्त्री रामशरण महत म अघि उभिएका छन् । यद्यपि रामशरण महत अहिलेका अर्थमन्त्री होइनन् । तर यसले के फरक पर्छ ! वास्तवमा रामशरण महत पश्चातका सबै अर्थमन्त्रीहरू एक प्रकारले रामशरण महत नै त हुन् । होइन र ? मेरो घरधनी पनि त अर्थ मन्त्रालयकै हुन् । त्यसकारण केही पर्सेन्ट रामशरण महत हुन् नै । अलिकति अन्तर दाह्रीको मात्र हो । मेरो घरधनी क्लिनसेभ्ड हुन् ।
हेर्नाेस्, हामीजस्ता घर नहुनेहरूका लागि एउटै रामशरण महत पर्याप्त थियो । तर यहाँ त मेरो घरधनीको रूपमा एउटा अर्काे रामशरण महतको दृश्यमा सशरीर उपस्थित थियो । जो मलाई अर्थात् एक किरायादारलाई पुरै हप्काएर देशको सबल अर्थतन्त्रबारे जानकारी दिइरहेका थिए ।